Photos of Emperor’s “Legendary Journey” Music Concert in Singapore | Myanmar Singer and Vocalist Photos
Photos of Emperor’s “Legendary Journey” Music Concert in Singapore
“Legendary Journey” Music Concert was held on May 1, 2011 (National Labour Day) at D'Maquee Indoor Theater in Singpore. Myanmar famous band “Emperor” led this concert and Myanmar famous rocker Zaw Win Htut performed for this concert together with other popular singers; A Thin Cho Swe, L Seng Zi, Wyne Su Khine Thein, Sai Sai Kham Hlaing, She, Chit Thu Wai and Chan Chan. The ticket prices are 40, 60 and 80 Singapore Dollars.
Popular Singer, Wyne Su Khine Thein
Popular Pop Singer, L Seng Zi
Popular Female Rock Singer, She
Hip Hop Singer, Sai Sai Kham Hlaing
Popular Pop Singer, Chan Chan
Myanmar Famous Rocker, Zaw Win Htut
Singers' Group Before The Show
“Legendary Journey” ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို မေလ (၁) ရက်နေ့ ( အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့) က စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ D'Maquee Indoor ပြဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီ “Legendary Journey” ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ Emperor အဖွဲ့က တီးခက်ပေးပြီ Famous Rocker ဇော်ဝင်းထွဋ် နဲ့အတူ အေသင်ချိုဆွေ၊ Lဆိုင်းဇီ၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ သျှီ၊ ချစ်သုဝေ နှင့် ချမ်းချမ်း တို့က အားပါးတရ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
A Thin Cho Swe,
Chit Thu Wai,
L Seng Zi,
MattMay 1, 2011 at 7:32 PMစကပ်အရှည်ဆုံးဝတ်ထားသူမှာ ချစ်သုဝေဖြစ်ပါကြောင်းReplyDeletenyeinchanhtweMay 1, 2011 at 8:19 PMလမ်းတယ်ဗျာ....ReplyDeleteD MaungMay 1, 2011 at 9:59 PMမိုက်တယ်ဟေ ဘယ်သူပြောမလဲ မြန်မာ မလေးတွေလို့ReplyDeleteAungMay 2, 2011 at 2:32 AMစကတ် မတို ၇င် စင် ပေါ်မှာ သီချင်း မဆို တတ် ကြတော့ဘူး ထင် ပါတယ်နော်ReplyDeleteAntiMay 2, 2011 at 4:57 AMငစိုင်းကို သောက်မြင်ကတ်ဆုံးပဲ ရုပ်ကိုက နေရာ တခု မရ ရအောင် လုပ်နေသလိုပဲReplyDeleteMattMay 2, 2011 at 6:24 AMဪ အဆိုတော်တွေ အဆိုတော်တွေ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကိုယ့်အစွမ်းစနဲ့ကိုယ်ပြီးအောင်မဆိုနိုင်ဘူးလားမသိ ပရိတ်သတ်ဖက်ကိုပဲ မိုက်ထိုးထိုးပေးနေကြတာပဲ တစ်ခါလည်းမဟုတ် နှစ်ခါလည်းမဟုတ် ပရိတ်သတ်ဆိုတာနဲ့ပဲသီချင်းကပြီးသွားတယ် အချောင်ခိုနေကြတာReplyDeleteaye ayeMay 4, 2011 at 4:17 AMMatt >> obviously you never been to Live concert. or do n0t understand music or just an idiot. sometimes crowd want to sing too. when singer heard the crowd singing it make the singer happy and crowd happy. Don't attack without brain on artist. OK.ReplyDeletewayyanMay 5, 2011 at 10:30 AMအေသင်ချိုဆွေ လေဖြတ်နေတယ်ဖြစ်မယ်နော်.....။ReplyDeleteayuuMay 5, 2011 at 3:47 PMကိုယ့်ကို ကို အထင်ကြီးနေတဲ့ဟာတွေ... မင်းသမီး မင်းသား အဆိုတော်ဆိုလဲ အားလုံးက လူကြီးပဲ....အမြင်ကိုကပ်တယ်.....ကိုယ့်ကိုကို အဲလောက်တောင် အထင်ကြီးမနေကြနဲ့...အဲလောက်တောင် အထင်ကြီးနေကြတယ်ဆိုလဲ အဆိုတော် မလုပ်စားတော့နဲ့ ကလပ်ကို ပဲသွားတော့... ပြောတော့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေတဲ့..ဝတ်ထားတာကြတော့ နိုင်ငံခြား သားတွေထက်ကိုဆိုးတယ်........ဟဟဟဟ ယွန်ဖို့ ကောင်းလိုက်တနာ...အထင်သေးတာ မဟုတ်ဘူးနော်...အထင်ကိုမကြီးတာ...ReplyDelete[MM]May 7, 2011 at 6:28 AMမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် စိုင်း၂ဘာဘာရူးထနေတာလဲမသိ Zzzzမွေးနေ့ပွဲကစပီး အချိုးမပြေတော့ဘူးကြည့်ရတာကလေးကလားဖိနပ်တွေစီးနေတာReplyDeleteJolianaMay 16, 2011 at 1:37 AMphotographer ka taw lite tar!bar pone tywe mhan la' ma ti buuu...yote pyat sin pyat tywe kyii pa'''....ReplyDeletenayMay 23, 2011 at 9:35 AMသြော် ........နာမည်ကြီးရင် ကြောင်သွားကြတယ်ထင်တယ်....ReplyDeletenayMay 23, 2011 at 9:45 AMအနုပညာရှင်တွေကို စေတနာနဲ့ အကြံပြုပါရစေ။ ရိုးရိုးလေးပဲ ကောင်းပါတယ်လို့၊၊ ရေရှည်ကို ကြည့်ပါလို့ .။ အသစ်အသစ်တွေ ကောင်းကြပါတယ် ။ ခဏ ပဲဗျ ။ ပြန်ပြန်ပျောက်သွားတယ်။ ဘယ်ရောက်သွားကြမှန်းမသိဘူး။ReplyDeletezaJune 5, 2011 at 2:23 AMဟုတ်တယ်..နာမည်ကြီးလာရင်အချိုးတွေကပြောင်းလာတယ်.သီချင်းကိုဦးစားမပေးပဲအ၀တ်အစားတွေပဲပြိူင်နေကြတယ်..အဆိုတော်နဲ့ မတူတော့ဘူး ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်တော့..လန်ထွက်နေတာပဲ...ReplyDeleteGong LiJune 5, 2011 at 3:03 PManyway, I like "She" Though she doesn't sing that much, I like her songs and her musical career. Whoever thinks about on their informal dresses, she is just formal. Like Zaw Win Htut. You rock..She " Simply the bestReplyDeletevanpiJuly 16, 2011 at 9:22 AMkong pa de chan chan kuaceih songReplyDeleteAdd commentLoad more...